Blue Daisy Hilqado Dhuuban Oo - Joornaalka Naqshadeynta
Hilqado Dhuuban Oo
Hilqado Dhuuban Oo Daisy's waa ubaxyo isku dhafan oo leh laba ubax oo isku dhafan mid, qayb gudaha ah iyo qeyb duleel ah. Waxay astaan u tahay isku xidhnaanta laba u taagan jacayl run ah ama xidhiidhka ugu dambeeya. Naqshadeeyuhu wuxuu isku dhex daraa si gaar ah ubax ubaxa jilicsan oo u oggolaaneyuhu inuu xirto buluugga Daisy siyaabo dhowr ah. Xulashada sapphires buluuga ah ee ubaxa ayaa ah in la xoojiyo dhiirigalinta rajada, rabitaanka iyo jacaylka. Sapphires huruud ah oo loo xilsaarey ubaxa udub dhexaadka ubaxleyda wuxuu siinayaa dareenka farxadda iyo kibirka taasoo siineysa bixiyaha aaminaad buuxda iyo kalsooni muujinta xarragooda.
Magaca mashruuca : Blue Daisy, Magaca naqshadeeyayaasha : Teong Yan Ni, Magaca macmiilka : IVY TEONG.
Hilqado Dhuuban Oo Teong Yan Ni Blue Daisy